नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा रहेका माधव नेपाल गोकुल बाँस्कोटाको यस्तो ठोकुवापछि तनावमा, अब के होला ? - News20 Media
June 6, 2021 N20LeaveaComment on नयाँ पार्टी खोल्ने तयारीमा रहेका माधव नेपाल गोकुल बाँस्कोटाको यस्तो ठोकुवापछि तनावमा, अब के होला ?
जनमत र राजनीतिक विचारका आधारले भन्दा पनि व्यक्तिगत दुस्मनीका कारणले यताउता भएका नेताहरु मात्र हुने भए । माधव नेपालसँग यसखालका नेताहरुको पंक्ति रहने भयो । तर, कार्यकर्ताको पंक्ति हल्लिएन ।माधव नेपाल पनि टेस्टेड नेता हुन् । उनले यसवीचमा जे सिद्धान्त उठाए, त्यसको विपरीत काम गरे । विधि पद्दति र अनुशासनको कुरा गर्नेले फ्लोर क्रस गर्न हुने कि नहुने रु तात्तातोमा त जसले पनि जस्टिफाई गर्न कोसिस गर्छ । तर, प्रकारान्तरले त्यो हुँदैन ।
कारवाही किन गरिएन त भन्दा त्यहाँभित्र एउटा मत उठेको छ । फर्किने ठाउँ पाइएन भन्ने छ । फर्किने ठाउँ के भयो भने हुन्छ त रु उनीहरुको तर्क भनेको जेठ २ हो । जेठ २ मान्दियो भने हुन्छ भनेपछि त्यो किन नमान्ने त । ल जेठ २ मान्दिउँ ।